အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ၉ မမ
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:18 AM
တော်တော် ရက်စက်တဲ့ မေ ပဲကွာ
ဗိုလ်ကြီးက ဘာလို့ကိုယ့်ဘာကိုယ်သတ်သေသွားတာလဲအစ်ကို တကယ်ဆိုမဖြစ်သင့်ဘူးဗျာ အဲလိုမျိုး။
အချစ်နဲ့ သစ္စာတိုက်တဲ့ စစ်ပွဲမှာ ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဘယ်သူမဆိုလဲ သားကောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ ညမီးအိမ်ပြောသလို အဲဒီကျည်ဆန်လေး ဝင်ရောက်သွားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ဗိုယ်ကြီးမှမဟုတ်တော့ပဲ သားကောင်ဖြစ်နေပြီမလား
ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်။ :))
ရင်ထဲမှာ နင့် ခနဲ့ ပဲဗျာ ။ရေးပြန်တော့လည်း ပက်ပက်စက်စက်ကြီးပါလား အစ်ကိုရာ။
တော်တော်ရက်စက်တဲ့မေ ပဲ....... ;(
အိမ်မက်ရေ..... ငါ့ကိုလဲ တတောင့်လောက်.....
အဆုံးစွန်ထိ နားလည်ပေးထားသူကိုမှ အဆုံးစွန်ထိလှည့်စားရက်တယ်နော်
အ+ ချစ်+ စစ်
အ လို့ ချစ်ပြီးရင် စစ်ဖြစ်တာ ဘဲလားဟင် ?
သစ္စာမရှိသူတစ်ယောက်အတွက် အသက်စွန့် သွားတာ မတန်ဘူးလို့ ထင်တယ် ကျနော်သာကြိုသိမယ်ဆို ကျည်ဆံကိုထုတ်ပြီးဖွက်ထားမယ် နောက်မှ မှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းမယ် ဟီးးး တပ်စုမှူးတဲ့ ဘယ်တော့ ဗိုလ်ဖြစ်သွားတာပါလိမ့် အဟမ်း အဟမ်းး အားလုံးလက်မြှောက် :P
ဒါဆို ဘလက် အတွက်က အချစ်ဟာ ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းပေါ့နော်....။ အင်းလေ အဲလိုပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်...။
ဒုန်းခနဲပဲ ဇာတ်လမ်းကလည်း။ အဲလိုဖြစ်မယ်မှန်းသိနေပေမယ့်လည်း လန့်သွားတယ် အဆုံးကျတော့။
ဖတ်ပြီးတော့ သက်ပြင်းချမိတယ်။ အရေးအသားကတော့ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အားလုံး ချစ်သူအပေါ်မှာ သစ္စာရှိနိုင်ကြပါစေ...
အရေးအသားတော့ ကြာလေ ကောင်းလေပဲ
ဒါပေမယ့် စိတ်တော့မကောင်းဘူး ဖြစ်သွားတယ်.
ူအစ်ကိုေ၇ တယ်မိုက်တာပဲ အဲဒီဗိုလ်ကြီးက။အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတာပဲ....
တိတ်တိတ်ကလေး ဖတ်သွားတယ်.. ( မအိ...)
စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်လုပ်နေပြီး ဒီလောက်လေးနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေရတယ်လို့အင်းးးးးးး ပျော့ညံ့လိုက်တာ
ဘလော့ပြန်ရေးတဲ့ အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်